02. May, 20113Comments
एउटा नयाँ अनुभवका लागि आतुर भइरहँदा त्यो क्षण फेरि म खिस्रिक्क परेँ। मलाई चिन्छु भन्ने विपश्यनाको पूर्व साधक कोही थिएन। फर्ममा कसैको सिफारिश चाहिने स्पष्ट थियो। अध्यात्मको क्षेत्रमा के जिद्दी गरिरहनु। म कर्मचारी दिदीसँग प्रतिवाद नगरी सर्लक्क फर्कें। सोचेँ मेरो सर्कलमा कोही ध्यानी छैनन्। जो छन् ती कहाँ छन् भन्ने टुंगो छैन। यसो गरु कि […]
यहाँ ब्रायन एडम्सको ट्विटर फलो गर्नु पर्दैन। न त विकिलिक्सको केबल फलो गर्दै अमेरिकी दूताबासका डकुमेन्टसँग घोत्लिनु पर्छ। इकोनोमिष्टमा के आएछ ? नेपाल र माओवादी बारे टाइम्स अफ इन्डियाले के लेखेछ ? केही दिनदेखि यी तमाम विषयहरुबाट मुक्ति मिलेको छ। काठमाण्डू लाइफ वरपर दाउपेच-प्रतिस्पर्धाहरु दौडिरहँदा मैले आफ्नो आनन्दको बाटोबारे सोच्न थालेको थिएँ। त्यहाँ के हुन्छ […]
29. Dec, 20102Comments
त्यो बेला माछा, भ्यागुता र सर्पहरु मेरा मुख्य दुस्मन थिए। आमाको अर्ति सुन्ने/बुझ्ने धैर्यता कहाँ !? भेट्यो कि मारिहाल्यो। सम्झँदा पनि जिउ जिरिङ्ग हुन्छ। त्यो दिन मैले कालो गोमन समातेँ। गोमन मुसाको दुलोभित्र तेर्सिर बसेको रहेछ। धान निकाल्न दुलोमा हात हालेको। गोमन च्याप्पै ! बरफजस्ता चिसा सर्प त पहिला पनि समातेको थिएँ तर गोमन कालको […]